Maro no efa milanja ny kihana mivaivay, ary raha ny ozona aza angamba no nahafaty efa maro no nitsipatsipaka. Ny sasany indray ao anaty fanjakana foana nanomboka tamin’ny fanjanahantany na iza na iza mitondra eo, ka toy ny efa azy i Madagasikara. Toa mbola lavitry ny kitay ny afo raha ny fiovan’ny fomba fanaovana politika, ka na efa halam-bahoaka izao aza tsy mahalala menatra. Firifiry amin’ireo minisitra naverina amin’ny toerany ireo moa no efa nilanjan’ny olona ambany fiadidiany sora-baventy, ary mbola mitohy izany izao saingy tsy mba hahalala menatra akory. Ekena fa mety manana ny traikefany tokoa ireny, saingy maro ny laza ratsy, ary efa naloham-bahoaka ny ankamaroany, saingy ny tian-kano tsy tian-kano no setrin’ny fitakiam-bahoaka. Ny fanjakana efa nitolefika sy naman’ny resy tanteraka indray amin’izao no midingin-drambo satria toa nivoaka mpandresy e! Ny feom-bahoaka feon’Andriamanitra, hoy ilay fomba fiteny malaza, saingy tsy misy dikany izany eo anatrehan’ny fitiavan-tseza sy fahefana. Mba rahoviana ihany re vao tena ho tanteraka ara-bakiteny sy araka ny hiheveran’ny besinimaro azy ilay hoe fanovana e? Mbola lavitry ny afo ny kitay hatreto, saingy tsy hatao hampitolefika raha mbola te hahita mangirana eo ambany vahoan’ireo maty eritreritra!